विराटनगर अस्पतालबाट हामफा'लेर बिरामीले गरे आ'त्मह'त्या ! आखिर किन आयो यस्तो सोच ?
विराटनगर, १९ असोज। विराट नर्सिङ होम एवं विराटनगर अस्पतालको दुई तलामाथिबाट हामफा’लेका एक जना बिरामीको मृत्यु भएको छ । अस्पतालको आईसीयूमा उपचाररत मोरङको मिक्लाजुङ गाउँपालिका–३ का ५३ वर्षीय अमृत गजमेरले सोमबार बिहान ५ः३० बजेतिर हामफा’लेर आ’त्मह’त्या गरेको प्रहरीले जनाएको छ ।
उक्त घटना पश्चात उनलाई उपचार गर्ने क्रममा बिहान ९ बजे मृत्यु भएको हो । मोरङ प्रहरी प्रमुख एसपी सन्तोष खड्काले प्रारम्भिक अनु’सन्धानबाट आ’त्मह’त्या गर्ने उदेश्यले हामफा’लेको हुन सक्ने देखिएको बताए ।
उनलाई फोक्सोमा ग’म्भीर समस्या देखिएपछि शनिबार अस्पताल भर्ना गरिएको थियो। त्यसै बिच चिकित्सकको सल्लाह बमोजिम त्यही दिनदेखि आईसीयूमा राखेर उपचार थालिएको प्रहरीले जनाएको छ। आईसीयूबाट गर्मी भएको बहाना बनाउँदै बाहिर निस्किएका गजमेरले दुई तलामाथिबाट हामफा’लेको जानकारी अस्पतालले प्रहरीलाई गराएको छ ।
हामफा’लेपछि ग’म्भीर बनेका उनलाई उद्धार गरेर अस्पतालकै आईसीयूमा उपचारका लागि भर्ना गरिएको थियो । तर उनी जीवित रहन सकेनन् । अस्पतालले यस घटनाको आधिकारिक जानकारी दिइसकेको छैन ।
मृत्यु अस्वभाविक देखिएका कारण अ’त्मह’त्या हो कि हैन भन्ने बारेमा घटनाको गम्भीर रुपमा अनु’सन्धान थालिएको उनले बताए । शव पोस्टमार्टमका लागि कोशी अस्पताल लैजाने तयारी प्रहरीले गरेको छ । उपचाररत अवस्थामा उनले किन आ’त्मह’त्याको बाटो रोजे भन्ने यकिन हुन नसकेको एसपी खड्काले बताएका छन् ।